Shiinaha Ragga caado-soo-saarka polo-soosaarka iyo Warshad | ISAPPARELS
Shaadhka polo ee caadada ragga
Style: Shaadhka polo ee caadada ragga
Kooxdaadu waxay jeclaan doontaa qaabka Polos-ka Waxqabadka Kala Duwan ee dhacdadaada xigta. La socoshada xawaaraha degdega ah ee xafiiska ama koorsada waligeed uma muuqan mid aad u wanaagsan. Laga sameeyay 100% caag, waa dhar khafiif ah. Waxay soo bandhigaan qoyaan-jajab, qallajin deg deg ah, iyo laalaab-iyo tikniyoolajiyad-diidmada Taasi waxay ka dhigan tahay snag-yada kaliya ee aad ku garaaci doonto ciyaartaada waxay ku yaalaan dhabarka sagaalka.
Style: shaarka polo
Gacmo: gacmo gaaban
Miisaanka ： 190g
Cabbirka baakadka: 25X25X2 cm
Miisaanka Dharka 180g-230g
6. Waxaan leenahay iibka jumlada noo gaarka ah ee khadka.
Pls ka eeg www.isapparels.com tirada ka hooseysa 1000 kumbiyuutar walxaha kasta.
Hore: Ragga funaanad funaanad suuf ah
Xiga: Maaliyada Ragga jiinyeer Collar Polo
Gacmaha dhaadheer ee ragga ...
Nimcaan Hilaac Short Half Zi ...
Shaarka polo Sport
Funaanadaha polo Ragga 1 ...
Ragga t-shirt polo suuf po ...